2020 မကုန်ခင်ထွက်မယ့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ နည်းပညာပစ္စည်းအသစ်တွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ? – SUNNY Tech News
2020 မကုန်ခင်ထွက်မယ့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ နည်းပညာပစ္စည်းအသစ်တွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
Posted byDaxDo 17th Nov 2020 22nd Nov 2020 Posted inUncategorized
အခုဆိုရင် 2021 ကိုရောက်ဖို့ကလည်း လပိုင်းပဲလိုပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် 2020 မှာထွက်ခဲ့တဲ့နည်းပညာပစ္စည်းတွေကတော့ အကုန်မဟုတ်သေးပါဘူး။ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်အနေနဲ့ ဆက်ပြီးရင်ခုန်ရမယ့်၊ နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် အမိုက်စား နည်းပညာပစ္စည်း (5) မျိုး ကျန်နေပါသေးတယ်။
(1). Xiaomi Mi Smart Speaker
Xiaomi ကအသစ်ထွက်လာမယ့် ဒီ Smart Speaker က Europe မှာတော့ မိတ်ဆက်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ Google Assistance နဲ့ 12W power ပါဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Design နဲ့ Speaker မှာ အသံထွက်တဲ့ ဘဲဥပုံစံအပေါက်ငယ်လေးတွေ စုစုပေါင်း 10531ပေါက်ပါဝင်ပြီး Stereo 2.0 audio output နဲ့ဆိုတော့ သုံးလို့အတော်အဆင်ပြေမယ့်ပုံပါပဲ။ Google Assistance ပါတဲ့ အတွက် “Hey Google” လို့ ပြောလိုက်တာ နဲ့ speaker ကို commandပေးလို့ရပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေအပြင် တခြား Setting တွေကိုပါ အသံနဲ့ control လုပ်နိုင်မှာပါ။ voice control ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် speaker မှာ microphone နှစ်လုံးတပ်ဆင်ပေးထားလို့ Speaker နားကိုကပ်ပြီး ပြောစရာမလိုပဲ အဝေးကနေ လှမ်းပြောလို့ရပါတယ်။ Bluetooth နဲ့ Wifi ပါတဲ့အတွက် SmartPhone, Smart TV စတဲ့ တခြား Device တွေနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။
(2). Xbox Series X, Xbox Series S
နောက်ပိုင်းE-sport communityမှာ PS5 နဲ့ အပြိုင်ဖြစ်လာမယ့် Xbox ရဲ့ Series X နဲ့ Series S ပါ။ Microsoft ကတော့ Series နှစ်မျိုးစလုံးကို November 11 မှာ စတင်ရောင်းချမယ်လို့ကြေ ငြာ ထားပါတယ်။ ဒီ Series နှစ်ခုမှာ X Series ကတော့ ဈေးပိုများမယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ EA ရဲ့ ဂိမ်းပေါင်း (60) ကျော်ကစားလို့ရမှာဖြစ်ပြီး တကယ့်ဂိမ်းအကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Battle field, Mass effect, Titanfall 2, Need for Speed Heat နဲ့တခြားဂိမ်းတွေလည်း ပါဝင်ပါ သေးတယ်။ Xbox Game Pass Ultimate နဲ့ EA Play အတွက်ကတော့ တစ်လကို 15 ဒေါ်လာကုန်ကျမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Xbox Series S ကိုလည်း အသေးဆုံး Xbox တစ်လုံးအဖြစ်မြင်တွေ့ရဉီးမယ့်အပြင် တကယ်မိုက်တဲ့ Gaming Performance တွေကိုမြင်ရမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။
(3). HomePod mini
၂၀၁၈ မှာထွက်ရှိထားတဲ့ HomePod ရဲ့မျိုးဆက်သစ် HomePod mini ကို APPLE က မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ အမြင့် 3.3″ နဲ့ ကိုယ်ထည် 3.9″ လောက်ပဲရှိပြီး Touch control ပါဝင်တဲ့ design လုံးလုံးလေးပါ။ Apple Music တစ်ခုထဲနဲ့တင်မကပဲ တခြား music streaming တွေကိုလည်း HomePod mini နဲ့ချိတ်ဆက်နားထောင်လို့ရမှာပါ။ Apple watch series5မှာပါတဲ့ S5 chip ကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် အကွာအဝေးအလိုက် အသံလှိုင်းတွေကို 360 degree ချိန်ညှိပြီး ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းသံဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ် “Hey Siri” လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ iphone ပေါ်က shortcut တွေကိုဖွင့်ခိုင်းတာ၊ Music alarm ပေးတာ၊ အိပ်ချိန်မှာ ambient sound တွေဖွင့်ပေးတာ စတဲ့ apple ရဲ့ features တွေအားလုံးကို command ပေးလို့ရပါတယ်။ November6ရက်နေ့မှာ Pre-order စလက်ခံမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်း $99 ပဲပေးရမှာဆိုတော့ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ Smart Home accessory တစ်ခုပါပဲ။
(4). Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro မှာ 5G network၊ 6.7 inch full screen, display ကိုမှ AMOLED curve screen နဲ့လာမှာပါ။ ဘယ်ဘက်အပေါ် ထောင့်မှာ dual punch hole selfie camera ပါဝင်ပြီး In-display fingerprint sensor ပါဝင်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်က စက်ဝိုင်းပုံစံခွက်ထဲမှာ Camera (3) ခုနဲ့ Sensor တစ်ခုထည့်သွင်းထားတဲ့ design က တော်တော်ကိုလှတာပါ။ Chipset အနေနဲ့ လည်း Kirin 9000 system chip ဖြစ်ဖို့များပြီး 8GB R​AM နဲ့ 12GBRAM ထွက်မယ်လို့ သတင်းထွက်ထားပါတယ်။ 4300MAH battery အပြင် 66W first Charger နဲ့ဆိုတော့ excellent battery life ပါပဲ။ Huawei Mate 40 Pro က ပြောထားတဲ့အတိုင်းသာ ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ “Flagship ဆိုတာဘာလဲ?” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေးပေးမယ့် Smart Phoneတစ်လုံးဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
(5). IPhone 12 mini
IPhone 12 mini ကိုတော့ IPhone 12 series ထဲမှာဆိုရင် ဘတ်ဂျက်ဖုန်းလို့ပြောရမှာပါပဲ။ တခြား 12 seriesတွေလိုမျိုး 5G network နဲ့လာမှာဖြစ်ပြီး 5.4 inch display ဆိုတော့ အသေးဆုံး၊ အပါးဆုံး၊ အပေါ့ဆုံး 5G Phone တစ် လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ OLED display, IOS 14 software, A14 chip နဲ့ front camera တွေကကျန်တဲ့ 12 series တွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ IPhone 12 နဲ့ မတူတာဆိုလို့ screen display size တစ်ခုပဲရှိတော့ IPhone 12 mini သာဝယ်မယ်ဆိုရင် 100$ လောက် သက်သာသွားမှာပါ။ Release Date အနေနဲ့ ကတော့ November လထဲမှာလို့ပြောထားတော့ IPhone 12 series ထဲမှာ ဝယ်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ iPhone တစ်လုံးလို့မြင်မိပါတယ်။
ထွက်လာသမျှ tech products တွေအားလုံး SUNNY eSTORE ကနေ မလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်နိုင်ကြောင်းလဲ သီတင်းကောင်းပါးပါရစေ။
Top5Best value-for-money Smart Phones you can choose under 2Lakh MMK
Must-have Electronic Accessories for Maximum Productivity | အလုပ်စားပွဲပေါ်မှာ ရှိထားသင့်တဲ့ ခေတ်မီ Accessories ၅မျိုး